Ny Black Hat SEO tetikady izay tokony hotsaraina araka ny Semalt
Ny môtera ambony ambony dia matetika midika hoe fahabetsoana ara-pahasalamana eo amin'ny tranonkalanao. Izany no mahatonga ny orinasa maro hampiasa vola amin'ny sehatry ny fikarohana. Koa satria mihamitombo ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny lozam-pifidianana, ny sasany dia nanaraka ny tetikady Black Hat SEO.
Google dia nahitana tetika marary maro izay raisin'ireo mpandraharaha mba hiantsoroka ny fikarohana. Nanavao ny algorithmy izy io mba hamantarana ireo tricks ireo ary hanasazy ireo meloka amin'ny fampihenana ny fisidinan'ny moto mpanodina na ny fandroahana azy ireo.
Ny fijerena ny fahitana ao amin'ny Google dia midika fitomboana ambany kokoa, izay mitarika amin'ny fivoarana sy ny fihenan'ny varotra ataonao. Ny maritrano sy maso iraisam-pirenen'ny varotra izay tsy mahafantatra ny fitsipika Google dia matetika mandika ny heloka bevava mitarika mankany amin'ny lozam-pikarohana ratsy kokoa.
Nanoro hevitra anao i Jack Miller, ilay Semalt Mpanantanteraka Suid-Senior Success, mba hanalaviranao ny tetika mainty SEO manaraka:
Ny fandaharana sasany dia mamerina manoratra lahatsoratra mampiasa ny dikany sy ny endri-tsoratra; Izany dia mihodina. Ireo fandaharan'asa ireo dia mampiasa thesaurus mba hanomezana ny teny syonony ary teny hafa mba hahitana ny endrik'ireo endrika samihafa.
Nahita fomba iray i Google mba hamantarana ireo lahatsoratra voatanisa. Ho an'ny maso tsy voatsabo, toa tsy manam-paharoa ireo lahatsoratra, saingy matetika izy ireo no tsy mahazatra amin'ny mpamaky olona..Tandremo ireo mpivarotra an-tserasera izay milaza fa afaka manangana ny volavolan-dalanao ry zareo ary mamoaka lahatsoratra marobe. Ny sasany amin'izy ireo dia mampiasa fitaovana fanodinana lahatsoratra
Google dia nampiasaina mba handaharana ireo pejy mifototra amin'ny isa maromaro. Tsy ela dia nivarotra teny fanalahidy manerana ny votoatiny ireo mpangalatra ka tsy miraharaha ireo mpamaky. Noho izany dia nanavao ny algorithm Google ijerena ireo hevi-dehibe hafa toy ny maha-mamaky ny maha-olona sy ny lanjan'ny fampahalalana ny votoatiny.
Androany, ny sandan'ny sokajin-tsolika eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 10% dia mety hahatonga ny Google hitsipaka ny votoatinao amin'ny fikarohana lalao fohy kokoa. Ny tenimiafina dia afaka mampitombo ny fikajiana, saingy i Google dia manandrana ny mahatakatra bebe kokoa ny momba ny pejy na ny votoaty ka ny tenimiafina dia tokony hifanaraka amin'ny votoatiny.
Ho an'ny mpividy mba hiverenan'ny rindran-kira, ny mpivarotra sasany dia manohana ny fanehoan-kevitra momba ireo bilaogy sy tranonkala. Noho ny rohy mitondra anjara biriky amin'ny sehatry ny fikarohana ao amin'ny tranokalanao dia toy ny tetikady lehibe izany. Ny rohy avy amin'ny vohikala maoderina sy bilaogy dia mitondra lanjany betsaka amin'ny fanatsarana ny fikarohana.
Ny tetikady iray izay nametrahan'ny mpandraharaha ara-barotra ny fametrahana fanehoan-kevitra amin'ny rohy mankany amin'ny tranokala hafa ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra. Ny tranonkala izay raisinao dia afaka mahita ny rohy ary mandefa azy ho toy ny spam amin'ny Google. Ratsy izany ho an'ny filaharana.
Raha vao voafafa ny votoaty. Hitady mozika fikarohana ny votoaty fa momba ny lohahevitra toy ny fanandroana. Raha mitady ny astrolojia ny mpampiasa, dia mahita ny votoatiny amin'ny valin'ny astrolojia mba hahatsapany fa afa-po amin'ny sarimihetsika Star Wars farany izy.
Manatontosa izany ny mpivarotra saro-pady amin'ny fanomezana baoritra finday hafa ho an'ny mpamaky olona. Manosika sazy henjana amin'ny milina fikarohana raha toa ka hita izany.
Mieritreritra ny tetikasan'ny SEO ny Black Tea satria manolotra sombin-dàlana ho an'ny karatra fitadiavana fikarohana izy ireo, saingy miharatsy hatrany ary tsy misy vidiny izy ireo. Ampiasao ny tetikady fotsy SEO, izay mitaky ezaka sy fotoana bebe kokoa, saingy ny vokatra dia ny fikaroham-boka mitahiry lalao fa tsy ny fandrahonan'ny sazy Source .